उपत्यकामा भक्तपुर सबैभन्दा बढी प्रदुषित | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home पत्रपत्रिकाबाट उपत्यकामा भक्तपुर सबैभन्दा बढी प्रदुषित
उपत्यकामा भक्तपुर सबैभन्दा बढी प्रदुषित
In: पत्रपत्रिकाबाट, स्वास्थ्य
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार उपत्यकाका शहरमध्ये भक्तपुर सबैभन्दा बढी प्रदुसीत रहेको पाइएको छ । सबैभन्दा बढी इट्टाभट्टा भएका कारण भक्तपुरको वायु सबैभन्दा बढी प्रदुसित भएको पाइएको छ । काठमाडौंको पुतलीसडक, भक्तपुरको सिद्धि स्मृति महिला तथा बालबालिका अस्पताल तथा काभ्रेको पाँखालमा राखिएका वायु प्रदुषण मापन गर्ने इ– स्याम्पलर नामक मेशिनले यस्तो तथ्यांक देखाएको हो । वैशाख महिनाको भक्तपुरको औसत प्रदुषण ८३, काठमाडौंको ६३ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पाइएको छ। नेपालको मापदण्ड ४० माइक्रोग्रामप्रति घनमिटर छ। पानि परेको बेलामा यो मात्रा केहि कम हुने भएकाले बैशाख महिनामा केहि मात्रामा कम भएको छ ।
लिडर्स नेपालले यूएसएआईडी (अमेरिकन सहयोग नियोग) अन्तर्गत पियर हेल्थ कार्यक्रममार्फत विगत दस महिनादेखि हावामा भएको २ दशमलव ५ माइक्रोग्राम भन्दा मसिनो धुलोका कणकोलगातार मापन गरिँदै आइएको छ । सोही अध्ययनको वैशाख महिनाको प्रतिवेदनमा यस्तो देखाएको हो । अध्ययन अनुसार नाकाबन्दी भई ईंटाभट्टा नचल्दा र चल्दाको वायु प्रदुषणको मात्रा आकास जमिनको फरक छ । नाकाबन्दीका समयमा ईंटाभट्टा सञ्चालन नहुँदा दैनिक औसत पिएम २ दशमलव ५ को मात्रा ५२ माइक्रोग्रामप्रति घनमिटरसम्ममा सीमित थियो। तर ईंटाभट्टा सञ्चालनमा आएपछि त्यो बढेर एक सय ५३ माइक्रोग्रामप्रति घनमिटरसम्म पुगेको छ ।
लिडर्स नेपालका महासचिव धिरज पोखरेलका अनुसार यसो हुनुको मुख्य कारणमा काठमाडौंबाट बहेको काठमाडौंको प्रदूषित हावा भक्तपुरमा पुगेर थप प्रदूषित भएर वहनु पनि हो । बालाजुबाट भक्तपुर हुँदै बाहिरिने हुनाले काठमाडौंको प्रदुषित हावामा भक्तपुर जोडिँदा यो मात्रामा बढी भएको उनको भनाइ छ। अर्काे कारणमा भूकम्पले अग्ला चिम्नी भत्काएपछि होचो चिम्नी हुनु हो। अग्ला भन्दा होचा चिम्नीले बढी प्रदुषण फैलाउने गर्दछ।
प्रदुषणको मात्रा विहानको समयमा बढी देखिएको छ । प्रदुषणको मात्रा विहान ६ बजेदखि बढ्दै जान्छ। १२ बजेपछि विस्तारै घट्दै जान्छ। प्रदूषणको मात्रा बच्चा स्कुल जाने तथा विहानको मर्निङ वाक गर्ने बेलामा नेपालको मापदण्ड (४० माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर भन्दा) दुई गुणा बढी पाइएको छ ।
क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. आमोद पोखरेलका अनुसार उक्त वायु प्रदूषणको मुख्य श्रोतमा पूर्ण रुपमा जल्न नसकेको दाउरा, कोइला, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल बाल्दा निस्कने धुँवा नै हो। बच्चा तथा बृद्धहरुमा यसको असर एकदमै बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा स्वासप्रश्वास सम्वन्धी समस्या, उच्च रक्तचाप तथा आँखा सम्वन्धी समस्या देखापर्ने गरेको उनले जनाए । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन अनुसार यसले बच्चाको दिमागमा पनि असर गर्ने गर्दछ। यसबाट उनीहरुको क्षमता बृद्धिमा पनि यसले नकारात्मक असर पार्ने
काठमाडौं उपत्यकामा सवैभन्दा बढी भक्तपुर प्रदुषित भएको पाइएको छ। ईंटाभट्टाका कारण भक्तपुरको वायु उपत्यकामै सबैभन्दा बढी प्रदुषित भएको पाइएकोे पछिल्लो तथ्यांकले देखाइएको छ। सबैभन्दा बढी ईंटाभट्टा भक्तपुरमा सञ्चालित छन्।
भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता भएर मात्रै यहाँ पाँच दर्जन भन्दा बढी ईंटाभट्टा सञ्चालनमा छन्। काठमाडौंको पुतलीसडक, भक्तपुरको सिद्धि स्मृति महिला तथा बालबालिका अस्पताल तथा काभ्रेको पाँखालमा राखिएका वायु प्रदुषण मापन गर्ने इ– स्याम्पलर नामक मेशिनले यस्तो तथ्यांक देखाएको हो । वैशाख महिनाको भक्तपुरको औसत प्रदुषण ८३, काठमाडौंको ६३ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पाइएको छ। नेपालको मापदण्ड ४० माइक्रोग्रामप्रति घनमिटर छ। वैशाखमा बेलाबेलामा पानी परेको हुनाले यो मात्रा केही कम हुन गएको देखिएको जनाइएको छ । सामान्य समयमा भन्दा पानी पर्ने समयमा यो मात्रा अझ कम हुने तथ्यांकले देखाएको छ ।
क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. आमोद पोखरेलका अनुसार उक्त वायु प्रदूषणको मुख्य श्रोतमा पूर्ण रुपमा जल्न नसकेको दाउरा, कोइला, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल बाल्दा निस्कने धुँवा नै हो। बच्चा तथा बृद्धहरुमा यसको असर एकदमै बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा स्वासप्रश्वास सम्वन्धी समस्या, उच्च रक्तचाप तथा आँखा सम्वन्धी समस्या देखापर्ने गरेको उनले जनाए । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन अनुसार यसले बच्चाको दिमागमा पनि असर गर्ने गर्दछ। यसबाट उनीहरुको क्षमता बृद्धिमा पनि यसले नकारात्मक असर पार्ने देखाइएको छ ।
एसपीलाई कारबाही सिफारिस
काठमाडौंका यी क्षेत्रमा हुन्छ तेस्रो लिङ्गीको यौन व्यापार